Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na omenaala Lai Mohammed nwere nnukwu atụmatụ maka njem nleta Naịjirịa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na omenaala Lai Mohammed nwere nnukwu atụmatụ maka njem nleta Naịjirịa
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Gbanwe ụlọ ọrụ okike, njem nleta na omenaala na mmanụ ọhụrụ nke Naịjirịa n'ime afọ anọ na-abịa.
Ike jupụtara na nnukwu atụmatụ ndị a bụ onye Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na Omenala Naịjirịa, Alhaji Lai Mohammed, webatara taa. Onye ozi ahụ kwupụtara echiche ya na Lagos pịa ogbako.
Mohammed onye gbaziri echiche na-ezighi ezi na ụfọdụ okirikiri na ọ lebara anya na ngalaba ozi n'oge ọchịchị gara aga kwuru na ya ga-agbakwunye n'ọtụtụ rụzuru edere ma mee ọtụtụ ihe maka mpaghara ọdịbendị na njem.
“Enwere echiche na-ezighi ezi na ụfọdụ okirikiri na anyị lebara anya na ngalaba Ozi karịa ka anyị lebara anya na Omenala na njem. “Nke a nwere ike ịpụta otu a n’ihi na okwu anyị na-ekwukarị na ngalaba Ozi bụ ndị na-anata nnukwu egwuregwu na mgbasa ozi. Ọ sịrị, "Mana enwere m ike ịgwa gị, na ihe akaebe, na anyị nwetara ọtụtụ ihe na Njem Nleta na Omenala, ma ọ bụ na Creative Industry n'ozuzu,"
N'igosipụta mmemme iji wulite na uru nke afọ anọ gara aga, onye ozi ahụ kwuru na ya ga-edozi usoro iwu dị mkpa, mechie nraranye nke National Policy on Culture and National Policy on Tourism.
Kpọmkwem, o kwuru na mịnịstrị ahụ ga-emecha ọrụ na Motion Picture Council of Nigeria Bill wee nyefee ya na Federal Executive Council.
O kwuru na "atụmatụ a bụ imepụta ọnọdụ na-achịkwa usoro kwesịrị ekwesị maka ngalaba ndị na-etinye aha Naịjirịa na map ụwa niile, si otu a na-adọta itinye ego itinye ego na ngalaba ahụ," Mohammed kwuru na ya ga-ehiwe Endowment Fund for The Arts iji mepụta usoro iwu maka ịkwụ ụgwọ nke ngalaba ahụ ma bido ịmalite itinye akụkụ nke njem nleta ndị na-eme njem nlegharị anya nke mejupụtara mkpụrụ osisi dị ala.
O kwuru na ya ga-eme nzukọ ọgbakọ maka ọdịbendị na njem nlegharị anya kwa afọ, bido na nkeji nke mbụ nke 2020 wee hụ na nzukọ nzukọ nke Onye isi ala na njem na-eme ka uto nke njem.
Mohammed kwuru na mịnịstrị ahụ ga-arụcha ọrụ na nguzobe Statistics Tourism na Tour Satellite Account na-arụ ọrụ na United Nations World Tourism Organisation.
O kwuru na ministri ahụ ga-ehiwe Ememe Ememme Mba Nile nke Daybọchị Njem Nleta ,wa, kama ọnọdụ dị ugbu a nke ọtụtụ ememe.
Onye ozi ahụ kwere nkwa ịhazi Nzukọ Mgbakọ mpaghara na Omenala na njem nleta, bido na 2o2o, na ebumnuche iso mba ndị ọzọ na mpaghara mpaghara Ọdịda Anyanwụ Africa na-arụkọ ọrụ iji kwalite mmepe nke ngalaba ahụ. “Anyị ga-aga n’ihu na nleta anyị na saịtị ndị njem nleta wee gaa ọtụtụ ememme dị ka o kwere mee n’ofe mba ahụ.
“Anyị ga-mezue ọrụ na ma mepee Kalenda Ememme National n’afọ a iji dọtakwuo ndị njem nleta, ndị ụlọ na ndị mba ọzọ, na mmemme ndị a,” ka o kwuru.
Mohammed kwere nkwa ị nweta ọtụtụ saịtị na Nigeria ka edere aha dị ka UNESCO World Heritage Saịtị na inyocha ngalaba onwe nzuzo nke mba Cultural Centers ná mba ọzọ. Iji mezuo ebumnuche ndị ahụ, onye ozi ahụ rịọrọ nkwado nke ndị metụtara ya, na-ekwusi ike na ọ nweghị ihe ọ bụla na-enweghị nkwado ha.
N'oge gara aga, onye ozi ahụ tụleghachiri ihe nlekọta ahụ mere n'ime afọ anọ gara aga nke gunyere nnabata nke nzukọ ọgbakọ na omenaala na njem nleta na nzukọ ịchụ nta ego nke ụlọ ọrụ.
O kwuru na ihe omume abụọ ahụ kwụrụ ụgwọ na-eduga na nlọghachi nke Onye isi ala na ọgbakọ maka njem, ịtọlite ​​otu Task Force na ụlọ ọrụ okike na ngalaba na-ahụ maka ngalaba na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, n'etiti ndị ọzọ.
Onye ozi ahụ chetara na mgbe duru otu ndị nwere oke aka na Inspekta-General nke ndị uwe ojii, ike ahụ guzobere ngalaba mgbochi-pịịlịl na usoro 36 ya na FCT. O kwuru na ngalaba ahụ mere ọtụtụ mwakpo nkwonkwo na ijichi nke prụ ọrụ, yana National Film and Video Censors Board.
eTN Njikwa Editor
eTN Ijikwa editọ ọrụ.
Jamaica na Saudi Arabia ibinye aka na akwụkwọ nke ebumnuche ...